Ku rakib emulatorka 'Nintendo DS emulator' iPhone-kaaga adiga oo aan lahayn Jailbreak [NDS4iOS] | Wararka IPhone
Ku rakib emulatorka 'Nintendo DS emulator' iPhone-kaaga adiga oo aan lahayn Jailbreak [NDS4iOS]
Waqti badan ayaa laga joogaa tan iyo emulators ee macruufka Uma muuqdaan muuqaalkooda bulshada, sanad kasta ka dib markii lagu dhawaaqay jebinta nooca cusub ee iOS, inbadan oo naga mid ah ayaa sugeyna barnaamijyada sida NDS4iOS ama PPSSPP in la cusbooneysiiyo oo laga dhigo kuwo la jaan qaada si ay ugu raaxeysan karaan awooda qalabkeena iyo faa iidooyinka jawiga firaaqadaas.
Sannadkan waxay u muuqataa taas Waxyaabaha ayaa ku adkaaday PPSSPP, iyo sababtoo ah qaar ka mid ah dhibaatooyinka farsamada ee la xiriira isbeddelada gudaha ee iOS 9 waa inaan dulqaad ku sugno oo aan u duceyno in emulatorkani ka badbaado noocaan cusub, hase yeeshee NDS4iOS wali wuu la jaan qaadayaa iOS 9, oo hadda waxay qaadatay tallaabo dheeraad ah, iyadoo ay suurtagal tahay in lagu rakibo bilaa xabsi.
Marar badan waxaa jira bogag u heellan samatabbixinta barnaamijyada dibad-baxa ka ah AppStore iyo iyaga u bandhig shahaadooyin Si loogu rakibo IOS adigoon soo marin A weyn, waxaan ka hadlayaa tusaale ahaan websaydhka iEmulators, oo had iyo jeer hubiya inay u oggolaadaan rakibidda barnaamijyadan Safari lafteeda iyo iyada oo aan loo baahnayn xabsi.
Markan waa iOSEM oo dib noogu soo celiyey Nintendo DS iyo emulator emulator NDS4iOS, maantana waxaan kuu sharxi doonaa sida loo rakibo.
1 Tababarka rakibaadda
2 Casharka Wareejinta Ciyaarta
Laga soo bilaabo qalabkeena macruufka waxaan ka furaneynaa Safari oo waxaan kaheleynaa cinwaanka soo socda iosem.us/app/install/nds.html
Marka shaashadani soo muuqato, waxaan gujineynaa rakib oo aqbal digniinta noo sheegi doonta "iosem.us wuxuu isku dayayaa inuu rakibo" nds4ios ""
Dib ugu noqo shaashadda guriga qalabkaaga oo sug appka si loo rakibo.
Kahor furitaanka barnaamijka, u gudub Settings> General> Profiles waxaadna ka heli doontaa muuqaal la rakibay sida kan sawirka kore ku yaal, dhagsii.
macruufka ayaa ku tusi doona macluumaadka astaanta oo ay ku jiraan barnaamijka uu ka tirsan yahay (nds4iOS), dhagsii Trust "magaca astaanta" oo aqbal fariinta soo socota.
Hada waad heleysaa app-ka wuuna kuu ogolaanayaa inaad socodsiiso, waxaa kaliya u harsan inaad ku darto ROMS, howl horey loogu sameeyay app-ka laftiisa laakiin Nintendo wuxuu ku guuleystay inuu ka saaro howshaas hadana waxaa laga sameeyay PC ama MAC , waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Casharka Wareejinta Ciyaarta
Ka raadi internetka ROM-ka aad rabto inaad soo dejiso, ma dhigi karno xiriiriyeyaal maadaama ay jabineyso xuquuqda daabacaadda, laakiin ma ahan inay kugu qaadato wax ka badan raadinta Google.
Talo: Ka raadi rom (E) ama Yurub magaca magaca ah si aad u hubiso inuu ku jiro luqaddaada oo aadan soo dejisan nooca Ingiriiska ama Jabbaan.
Haddii ROM-ka la soo dejiyey la isku cadaadiyo hubi inaad fureyso, waxaad u isticmaali kartaa WinRAR Windows-ka ama Keka-ka OS X, feylka soo baxayaa waa inuu ahaadaa ".nds".
Fur iTunes oo ku xir qalabkaaga macruufka kombuyuutarkaaga PC ama Mac.
Qeybta Codsiyada lagu rakibay iPhone-kaaga, u tag xagga hoose si aad u aragto kuwa taageera wareejinta faylka, hel oo guji NDS4iOS.
Ku jiido feylka ".nds" liiska midigta ku yaal (madhan haddii uusan jirin ROM horay loo raray) oo ka hubi iPhone-kaaga in si sax ah loogu raray barnaamijka NDS4iOS.
Haddii wax walboo sifiican udhaceen, horeyba waad u laheyd, hada bilow ROM-ga aad rabto oo ku raaxeyso Ciyaaraha aad jeceshahay Nintendo DS qalabkaaga OS.
Nota: Kaliya qalabka leh A7 chip ama ka sareeya ayaa awood u yeelan doona dhamaan ciyaaraha Nintendo DS 60 fps (iPhone 5s ama wixii ka sareeya), iPhone 5 ama aalado leh A6 chip ayaa ciyaari doona ciyaaro la aqbali karo iyo kuwa leh A5 chip (iPhone 4s, iPod Touch) 5G) iyadoo kuxiran ciyaarta waxay ka hooseysaa 20 fps.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Ku rakib emulatorka 'Nintendo DS emulator' iPhone-kaaga adiga oo aan lahayn Jailbreak [NDS4iOS]
Alexander Luengo dijo
xD ama waalan Waxaan ku rakibayaa shahaado shiineys ah oo aan la garanayn halka ay ku jirto mobilka, aan tagno, iyo horumariya ahaan kuma talinayo qof inuu sameeyo.
Jawaab Alejandro Luengo
Waad ku mahadsantahay talada. Laakiin halkee ayaad ka ciyaari laheyd ciyaarahan caadiga ah?
Luis, ilaahay dartiis, u iibso DS aad ka hesho gacan labaad oo xaalad fiican ku jirta, aadna uga wanaagsan
waan ka xumahay inaad hesho 🙂
Ma heli karo bog leh qolal shaqeeya 🙁
Jawaab ku bixi Marcos Suárez
Midna kuma siin karo, waan ka xumahay, sikastaba waad awoodaa Google «roms nds» waadna heli doontaa, way fududahay 😀
Tani waxay u egtahay in la siinayo kaarka bilaashka ah ee mobilada si ay ula dagaallamaan fayras.
Fikrad badan kama haysto khatarta dhabta ah ee aad qaadanayso rakibida shahaadadan. Qof ma ii sharixi karaa xoogaa si aan u go'aansado haddii aan rakibayo iyo in kale?
Aad baad u mahadsantahay iyo salaan!
Jawaabtan waxay u shaqeysaa adiga iyo labada Alexandros ee kore:
Ku rakibida astaan ​​aan la garanayn halka ay ka timid macruufka waxay leedahay khatar amni, gaar ahaan waxay kuxirantahay nooca astaanta uu yahay, astaamahaan waxaa kamid noqon kara furaha shabakada Wi-Fi, goobaha VPN, aqoonsiyada, siyaasadaha amniga iyo waxyaabo badan oo dheeri ah.
Iyada oo nooc gaar ah oo muuqaal ah, waxaad meel fog ka ogaan kartaa barnaamijyada lagu rakibay qalab iyo macluumaad kale oo kala duwan oo ku saabsan, sida boqolkiiba batteriga iyo kuwa kale, sidoo kale waxaad meel fog ka dhisi kartaa siyaasado nabadgelyo (maareynta lambarka sirta ah si aad u hesho aaladda, si kastaba ha noqotee tan lama beddeli karo, waxay u baahan tahay oo keliya isticmaalaha inuu ka beddelo aaladda mar kasta oo X ah ama inuu noqdo mid murugsan halkii uu ka noqon lahaa PIN), oo xitaa rakibi WebClips, barnaamijyada qaarkood oo ku yaal Sprignboard-ka oo ah kuwa loo maro websaydhada.
Kuwani waa wax yar oo ka mid ah adeegsiga iyo noocyada astaamaha la heli karo, hadda, aan u gudubno astaanta rakibaysa degelkan su'aasha laga qabo:
Macluumaadka ay rakibtay iOSEM.US waa shahaado ganacsi, muuqaalkan waxaa loo isticmaalaa in lagu oggolaado furitaanka codsiyada ka baxsan AppStore (NDS4iOS kiiskan), isticmaalehu wuu ku kalsoonaan karaa astaanta iyo barnaamijyada lagu rakibay shahaadadan waxaa lagu fulin karaa aaladda iyada oo aan la marin dukaanka Apple, tani waxay tusineysaa inaan furi karno emulatorka iyadoo aan la ansaxin Apple iyo dhamaan barnaamijyada kale ee ku rakiban shahaado isku mid ah, wax intaa dhaafsiisan, tani ma fureyso albaabka lagu rakibo barnaamijyo kale adigoon ogolaan , waxay kaliya muujineysaa in dhammaan barnaamijyada lagu rakibay shahaadadan (iyagoo u oggolaaday rakibiddooda iyagoo ka aqbalaya Safari digniinta weydiisanaya in lagu rakibo barnaamij) lagu fulin karo qalabkaaga, laga bilaabo Settings> General> Profiles> TARGET PROFILE they will awood u yeelan karto in la ogaado barnaamijyadooda lagu rakibay iyadoo la adeegsanayo astaantaan oo xitaa laga noqon karo kalsoonida la siiyay lana tirtiro dhammaan barnaamijyada ku jira
Gunaanad noocee ah ayaan qaadannaa?
1. Waa khatar in la rakibo astaamo laga helo ilo aan la garanayn maxaa yeelay waxay ka turjumaysaa in barnaamij kasta oo lagu rakibo boggan uu furi karo isticmaalaha, xitaa haddii ay ku jirto furin
2. Emulators waa barnaamijyo uusan Apple ku taageerin AppStore waana sababta ay ugu qasban yihiin inay adeegsadaan websaydhadan iyo shahaadooyinkan si loogu rakibo loona isticmaalo sidii hore iyadoo la adeegsanayo khiyaamada lagu beddelayo taariikhda.
3. Faahfaahintan gaarka ahi waa inaysan keenin wax khatar ah, aniga laftayda ayaa rakibtay oo kalsooni ku qabaa waxaanan u isticmaalaa NDS4iOS dhib la'aan iyo qalabkeyga oo aan lahayn dabeecad aan caadi ahayn (marwalba waad xaddidi kartaa isticmaalka xogta barnaamijkan tusaale ahaan), haddii waad ku kalsoon tahay, waa sida ugu fudud ee aanad ku rakibayn wax barnaamij ah oo dheeraad ah Safari.
4. Had iyo jeer waa suurtagal in la tirtiro astaamaha iyo barnaamijyada la xiriira si loo soo celiyo nabadgeliyadii aan horay u haysannay.
Waxaan rajeynayaa inaan xaliyay shakigaaga, mana Actualidad iPhone ama aniga mas'uul kama ahan isticmaalka la siin karo muuqaalkan, anigoo dhahay waan rakibay waana ku kalsoonahay aaladdayda dhib la'aan.
Bro ma helayo barnaamijyada iTunes, kaliya kan Netflix, maxaan sameyn karaa?
Jawaab Mario Mendoza
Kii la rakibay muddo 2 maalmood ah ma sii shito ma shaqeynayo
Waxay daaran tahay oo damineysaa
Ku jawaab salpa
Mario, Salpa iyo Boja, ma tihid qofkii ugu horreeyay ee wax sidan oo kale ah ii sheega, qalabkeyga oo leh iOS 9.1 wuu sii shaqeynayaa iTunes-na wuu aqoonsan yahay barnaamijyada, waxay umuuqataa inaadan kali ku ahayn dhibaatadan, waxaan kugula talinayaa inaad had iyo jeer keydiso cayaarahaaga oo aad ku qaban karto PC ama daruur iyo haddii ay dhacdo inaad weydo wado aad ku sameyso ama aad ku xalliso dhibaatada, ka tirtir astaanta iyo barnaamijka (maadaama kuwani aysan kaa caawinaya xaaladaas), waxaan ku siin lahaa xoogaa xal ah laakiin waa iOSEM.US yaa baari kara arinta ...
Waxay igu dhacdaa si isku mid ah. Si fiican ayaan u shaqeynayay imikana iima oggolaan doono ...
Nabadeey Juan, maxaa igu dhaca emulator-ka waa inaan sifiican u rakibo laba maalmood, wax walba waa ok
Laakiin markaa waxaa jira kaliya astaanta haray
Ma fahmin waxa dhaca
Waxaan isku dayay inaan tirtiro oo aan markale rakibo aniga iyo:
«Lama dajin karo barnaamijka. Hadda ma rakibi kartid nds4ios »
Waxay umuuqataa in Apple xanibeen ... O_o
Waxaan haystaa macruufka 9.2 mana rakibayso emulator kasta, ama noocyadii hore, ma waxay u noqon doontaa nidaamka cusub ee hawlgalka ee iPhone?
Waxaan dhawaan u cusbooneysiiyay IOS 9.3 mana i siineyso ikhtiyaarka astaamaha.
Iima ogola in aan wax soo dejiyo
VeDayaanna ( dijo
Aniga igama dhameysaneyso soo dejinta aniga, had iyo jeer wey barafoobaan kahor intaysan dhameystirin waxayna igu tuuraan fariinta "soo dejintu hada lama dhameystiri karo", tani way ila yaaban tahay maxaa yeelay emulator-ka GBA dhibaato kuma qabin rakibida iyo socodsiinta. Waxaa laga yaabaa inay tahay nasiib darro nasiib darro ah.
Jawaab ku sii Zvezdanov (@Zvezdanov)
Sideen ugu isticmaali karaa iPad-ka, feylku wuxuu leeyahay .nds waxaanan ku waafajiyaa Dropbox laakiin qolku kama muuqdo arjiga
Sida gebi ahaanba loo tirtiro loona joojiyo akoonkaaga WhatsApp
Springtomize 3 oo ku saabsan inuu yimaado Cydia oo la cusbooneysiiyay iOS 9